Posted by Tranquillus | Jan 26, 2021 | Xafiiska
A animation dhaqdhaqaaq dukaameysi-yar oo qurux badan oo ku jira PowerPoint. Si aad u soo saarto waxaas oo dhan waxaad xaq u leedahay tanno talooyin ah. Hab wanaagsan oo loogu kaydiyo fikradaha wanaagsan ee bogaggaaga xiga. Ka faa'iideyso fursadda inaad dib u eegis ku sameyso qaybaha kala duwan ee soojeedinta wanaagsan ee maqaalka intiisa kale.
Sii diyaari qaab-dhismeedka wax-soo-saarkaaga
Markay dadku isu tagayaan inay ka soo qayb galaan bandhiggaaga. Uma iman doonaan inay eegaan sawirro qurux badan. Waxay leeyihiin shaqo hubaalna waqti uma helin inay lumiyaan. Sidaas darteed waa inaad si sax ah u diyaarisaa fariinta aad rabto inaad gudbiso. Qorshe faahfaahsan oo qeexaya isku xigxiga maaddooyinka aad ka wada hadli doontid iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin waa shardi aasaasi ah.
Hubso joogteynta bandhiggaaga
Iyadoo fikrad cad laga qabo sida ay faragelintaadu maskaxda ugu dhici doonto. Waxaa muhiim kuu ah adiga inaad hubiso joogteynta nuxurka iyo qaabkaba. Haddii isbarbar waliba adeegsado font iyo midabbo kala duwan. Haddii aad dhahdo ereyo is khilaafsan ama gebi ahaanba isku dhafan, isku soo wada duub khaladaad yar ayaa dib u soo celin doona sawir hiwaayadeed. Halka, liddi ku ah, koox bogag ah oo ixtiraamaya isla jaantus garaaf ah ay leeyihiin bayaan toosan oo si fiican loo muujiyey. Waxay cadeyneysaa inaad sifiican u garaneyso xaalada.
Warbaahinta sifiican u isticmaal
Waxaa loo istcimaalay si xad dhaaf ah, animations leh sawirro qurxoon ayaa dhagaystayaashaada ka dhigi kara inay soo jeedaan Si kastaba ha noqotee, iska jir buunbuuninta ka jirta aaggan. Bogagga lagu sharraxay sawirro qurxan oo qurxin ah oo aan waxba soo kordhinayn. Muusikada filimka ee dhexda soo bandhigga si loo muujiyo faahfaahin aan qiimo lahayn. Waxaas oo dhan waxaa loo qaadan karaa inay tahay khatar la'aan. Xusuusnow in sawirku ka fiican yahay kun eray oo ay fiican tahay in la fududeeyo. Bandhiggu waa inuu ku saleysnaadaa faragelinta afkaaga. Bogagga waxay u joogaan inay ku taageeraan oo ay muujiyaan ujeeddadaada.
Adeegso ilaha khuseeya
Markaad tiriso lambar, macluumaad, waa muhiim inaan ogaanno asalka xigashadaada. Tani waxay u oggolaan doontaa dhagaystayaashaada inay baaraan run ahaanta macluumaadka aad siiso. Adag iyo halista shaqadaada lama weydiin karo. Kalsoonidaada ayaa soo bixi doonta iyada oo la xoojiyay. Kuma wareeri doontid kuwa lambarrada tuuraya ama dhaha waxyaabo aan la caddeyn karin, kuwa wax dila.
Ku celceli tababarkaaga kahor D-Day
Laqabso ku celcelintaada ku habboon caqabadaha bandhigga ay tahay inaad bixiso. Kulan deg deg ah oo lala yeesho asxaabta, tijaabooyinka caadiga ah ee fudud ayaa kugu filan. Dhinaca kale, mawduuc saameyn culus ku leh haddii qalad dhaco. Waa inaad ka fogaataa dhammaan dayacaadda, illaa aad aqbasho cawaaqibka. Su'aal kama taagna inaad ku ogaato macmiilka ama maamulaha hortiisa in mid ka mid ah cinwaannadaadu aysan muuqan. Meeshii aad waligaa ilaawday inaad higgaadiso dhamaan qoraaladaada. Wax walba waa in horay loo sii hubiyaa.
Tababbarka animation dhaqdhaqaaqa ee PowerPoint 5-Maarso, 2021Tranquillus
horeBooqashooyinka caafimaadka ee 2021: waa maxay waajibaadkaagu?
socdaShirkadda: shaqaaluhu mar dambe ma awoodi doonaan inay xirtaan waji-shareerka guryaha lagu sameeyo